‘गरीबलाई प्रकृति पनि निष्ठुरी हुने रहेछ’ - Kantipath.com
बाढीले घरखेत बगाएर बेसहारा बनेकी हेलम्बु–२ गणेशबगरकी राम्री लामाका आँखा अझै ओभाएका छैनन् । गत असार १ गते साँझ मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले उहाँको घर बगाएर लग्यो भने भएको थोरै खेत पनि बगरमा परिणत गरिदिएपछि उहाँको परिवार सुुकुम्बासी बनेको छ ।
घरबाट झण्डै आधा घण्टाको दूरीमा बग्ने मेलम्ची खोला अहिले आफ्नो घर भएको ठाउँबाट बगेको देख्दा उहाँ अत्यन्त दुःखी हुनुहुन्छ । “अब कहाँँ बस्ने ? जग्गाको बन्दोबस्त गरे घर बनाउन सहयोग गर्ने बताउँछ गाउँपालिका । आफूसँग अर्को जमीन छैन । खोला घटेपछि पहिलेकै ठाउँमा बनाउँ भने फेरि यस्तै बाढी आउन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामी भूमिहीनलाई सरकारले यही गणेशबगरको पाखोमा घर बनाई दिनुपर्छ ।” आफूले केही दिनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढीग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गर्दा पनि यही गुनासो राखेको उहाँको भनाइ छ । जिल्लाकै घ्याङफेदीमा रहेको घर २०७२ सालको भूकम्पले भत्काएपछि उहाँले गणेशबगरको छेउमा रु चार लाखमा चारआना जग्गा किनेर पक्की घर बनाउनु भएको थियो ।
बाढीले असर पु¥याएको मेलम्ची बजारका बासिन्दा भत्किएका घरबाट काम लाग्ने कुनै सामान भए निकाल्न र बालुवा, ढुङ्गा पन्छाउन शुरु गरेका छन् । माथिबाट खोलामा बाढी आउँदै गरेको केही समयअघि सूचना पाएका कारण यहाँ मानवीय क्षति हुन पाएन । केही व्यक्तिले मात्र घरभित्रका महत्वपूर्ण कागजात र बहुमूल्य सामान निकाल्न भ्याएका थिए । यस्ता प्राकृतिक विपद्मा पूर्वसूचनाले ठूलो क्षति हुनबाट रोक्न सकिने अनुभव यस घटनाले सिकाएको मेलम्ची–६ का वडाध्यक्ष जीतराज थापा बताउनुहुन्छ । खोलाको अतिक्रमण गरी घरलगायत अन्य संरचना निर्माण गर्ने, खेती लगाउने गरेका कारण पनि यसपटक बढी क्षति भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले क्षति भएका घर, झोलुङ्गे तथा पक्की पुललगायतका संरचनाहरु ९० प्रतिशत मापदण्ड विपरीतका छन् । खोला किनारबाट १०० मिटर राख्नुपर्नेमा कतिपय ठाउँमा त २५ मिटर पनि थिएन ।”
Previous Previous post: ठेक्का लिएर सडक अलपत्र पार्ने कांग्रेस सांसद जिपछिरिङको पोल-पोलमा फोटो !
Next Next post: पार्टी र संसदबाट निष्काशित प्रभु साह आइटी आर्मी बनाउदै
१४ वर्षीया बालिकालाई करणी गरेको आरोपमा एक जना प्रहरीकाे फन्दामा
वडाध्यक्षसहित दुईजनाको शव फेला
परराष्ट्रमन्त्री महरासँग प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्यहरुको भेट
आज ५ सय भन्दा धेरैलाई कारबाही : भोलीदेखि निषेधाज्ञा झन् कडा